Hanah Bɔɔ Mpae Hwehwɛɛ Ɔbabarima Samuel | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
Hanah Bɔɔ Mpae Hwehwɛɛ Ɔbabarima
Ná Israelni barima bi a ɔde Elkana wɔ yerenom mmienu. Baako de Hanah, ɛnna baako nso de Penina. Nanso na Elkana dɔ Hanah paa. Da biara, na Penina serew Hanah efisɛ na Hanah nni ba biara. Nanso Penina deɛ, na ɔwɔ mma pii. Afe biara, na Elkana ne n’abusua kɔ Silo kɔsom wɔ asɔrefie hɔ. Bere bi a wɔkɔɔ hɔ no, Elkana huu sɛ ne dɔfo Hanah werɛ ahow paa. Ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Hanah mesrɛ wo, gyae su. Mewɔ hɔ ma wo. Medɔ wo.’
Akyiri yi, Hanah nko ara kɔe sɛ ɔrekɔbɔ mpae. Ɔrebɔ mpae nyinaa na ɔresu, na ɔsrɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa no. Ɔhyɛɛ Yehowa bɔ sɛ: ‘Yehowa, sɛ woma me ɔbabarima a, mede no bɛma wo, na ɔbɛsom wo ne nkwa nna nyinaa.’
Ɔsɔfo Panyin Eli huu sɛ Hanah resu, na n’adwene yɛɛ no sɛ wabow. Hanah ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Ɛnte saa me wura, mennom nsa biara. Mewɔ ɔhaw kɛse bi. Ɛno na mereka ho asɛm akyerɛ Yehowa.’ Eli huu sɛ nea osusuw faa Hanah ho no nyɛ nokware. Enti ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Onyankopɔn mfa w’abisade mma wo.’ Afei Hanah ho tɔɔ no, na ɔsan kɔɔ ne fie. Annu afe mpo na Hanah woo ɔbabarima, na ɔtoo ne din Samuel. Wunhu sɛ Hanah ani begye paa?
Hanah werɛ amfi ɛbɔ a ɔhyɛɛ Yehowa no. Bere a otwaa Samuel nufu ara pɛ na ɔde no kɔɔ asɔrefie hɔ sɛ ɔnkɔsom. Hanah ka kyerɛɛ Eli sɛ: ‘Abofra a mebɔɔ ne ho mpae no ni. Mede no ama Yehowa ne nkwa nna nyinaa.’ Afe biara, na Elkana ne Hanah kɔsra Samuel, na ɛyɛ a wɔpam atade nsasin kɔma no. Yehowa maa Hanah woo mmabarima mmiɛnsa ne mmabaa mmienu kaa ho.
“Monkɔ so mmisa, na wɔde bɛma mo; monkɔ so nhwehwɛ, na mubehu.”—Mateo 7:7
Nsɛmmisa: Dɛn nti na na Hanah werɛ ahow? Dɛn na Yehowa yɛ de hyiraa Hanah?
Yehowa mu gyidi a na Hanah wɔ no boaa no ma otumi gyinaa tebea a na ayɛ sɛ wontumi nyɛ ho hwee no ano.